Ciqaabta Carruurta In Muddo Dheer ay Ku Qaataan Xabsiga Danbiyo yaryar oo ay Galaan Awgii
Thursday 12th November 2020 17:18:29 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
"Qorshahaygu waa in aan shaqo raadsado oo aan shaqeeyo. Ma doonayo in aan ku noqdo dugsiga sababtoo ah
[dugsigu] waxa uu igu celinayaa fasalka sideedaad aniguna ma rabo arrintaas.”
- Bukhari Awil Mohamed, oo hadal jeediyey kadib markii laga soo daayey xabsiga. Waxa uu ahaa 15 jir markii lagu xukumay laba sanno oo xabsi ah telefoon uu xaday awgii.
Miyay ahayd maxkamaddu in ay ku xukunto Bukhari labo sanno oo telefoon qiimihiisu yahay $50 USD ? Dadka qaar ayaa ku doodaya in ay jawaabtu haa tahay. Xadista telefoonada oo soo kordhaya Somaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, dad badan oo waaweyn, oo ay ku jiraan dadka ka shaqeeya waaxda caddaaladdu, waxa ay aaminsan yihiin in jawaabta ciqaabta ahi ay tahay qorshaha wax-ku-oolka ah ee lagu cabsi gelin karo dhaqankaa cusub ee soo kordhay. Waxa ay ku adkaysanayaan in dhallinyarta oo loo diro xabsiga ficilka ay sameeyeen awgii ay tahay rajada ugu wanaagsan ee lagu soo afmeeri karo danbiyada yaryar ee ay carruurtu galeen sida xadista telefoonka iyo dagaalka.
Balse xabsigu dhaqan-celin umuu samayn Bukhari. Waxa ay u horseeday in ay ku qanciso in waxbarashadii oo uu dib ugu noqdaa ayna mustaqbalkiisa qayb ka ahayn. Markii laga soo daayey xabsiga, umuu arkayn in dugsiga oo uu ku noqdaa si uu u dhammaystirto waxbarashadiisu ay tahay arrin uu ka fikirayo.
Xabsiyentu may ahayn jawaabtii ku munaasibka ahayd qaladka uu sameeyey Bukhari. Somaliland, Xeerka 2007 ee Garsoorka Carruurtu waxa uu garsooreyaasha u dejinayaa hannaan suubban oo ay raacaan marka ay go’aanka ka gaadhayaan qaabka ay uga jawaab celinayaan qof dhallinyaro ah oo danbi galay. Xeerkani waxa uu ka dalbayaa garsooreyaasha in ay ula dhaqmaan carruurta si shakhsi ah iskuna dayaan in ay ogaadaan sababta ku kaliftay in ay maxkamadda hor yimaadaan. Xeerku waxa uu ka reebayaa fikirkooda gaaban ee ah in la ciqaabo, wuxuuna ku dhiiri gelinayaa in ay ka fikiraan mustaqbalka fog oo ah sidii loo horumarin lahaa gooba dhaqan celinta dhallaanka. Hadafkaa waxa lagu gaadhayaa iyada oo loo arko in xabsigu noqdo waxa ugu danbeeya ee laga maarmi waayo, iyo haddiiba ay dhacdo in uu noqdo mudada ugu gaaban oo dhallinyar kasta oo lagu helo danbi ay ku qaataan. Xeerku waxa uu farayaa garsooreyaasha in ay tixgeliyaan ciqaabta ku salaysan bulshada ee loo yaqaano xadhiga ka leexinta carruurta ee kiis kasta oo la xidhiidha carruurta.
Warbixintan manta la baahiyey,Ciqaabta Carruurta In Muddo Dheer ay Ku Qaataan Xabsiga Danbiyo yaryar oo ay Galaan Awgii, sheekada Bukhari ayaa lagu soo bandhigayaa.Waxa ay ka hadlaysaa in xeerku soo bandhigayo jawaabo munaasib ku ah da’da dhallinyarta oo lagula xisaabtami karo ficilada ay sameeyaan halkii loo diri lahaa xabsi.
Bukhari may ahayn in xabsiga loo diro telefoon uu xaday awgii. Garsooruhu waxa uu amri karayey habab kale oo dhaqancelin ah oo lagula xisaabtami karo casharna loogu dhigi karo ay ku kala saaraan qaladka iyo saxa, balse ay xabsiga dibadda ka ahaadaan.
Warbixintani waa tii saddexaad ee taxane shan qaybood ka kooban,Fashil-wadareed: Sida uu Hanaanka Cadaaladda Danbiyada ee Somaliland uu u Waxyeelleeyo Carruurta iyo Waxa aan Ka Wada Qaban Karno. Ujeedada taxanuhu waa sidii ay bulshadu u ogaan lahayd dhawrista sharci ee ay heli karaan carruurtu iyo sidii qof kastaa awood ugu yeelan lahaa uu ku qaado tallaabo si ay xeerarkani u noqdaan qaar waaqaca ka turjumaya.
Afarta mawduuc ee kale waxa ay kala yihiin: maxay sharci darro u tahay in la ciqaabo carruurta 14 jir iyo ka yar ee ku xusan Taxanaha Koowaad; Sida caruurta loo xabsiyeeyo iyagoo kiiskoodu maxkamada ka socdo ee ku xusan Taxanaha labaad; sida nidaamka caddaalad ciqaabeedku uu meesha uga saaray masuuliyaddii qoyska, doorkii bulshada, isku duubnidii iyo barnaamijkii waxbarashada xukuumadda iyo adeeggii bulshada ee ku xusan Taxanaha Afraad; iyo waxa ay hadda samayn karaan dadka ka shaqeeya nidaamka caddaalad ciqaabeedku, iyaga oo isticmaalaya inta yar ee dhaqaalaha ah ee ay haystaan si loo fuliyo Xeerarkan ee ku xusan Taxanaha Shanaad. Xeerarka Somaliland way illaaliyaan carruurta sidaa darteed waa inay joogaan guryaha oo aan xabsiga lagayn. Tani waa masuuliyad qof kasta saaran sidii loo hirgelin lahaa.
Si aad u akhridid warbixinta waxna uga ogaatid sidii aad qayb uga noqon lahayd xalka gacana uga gaysan lahayd,guji halkan.
Si aad u akhridid Ciqaabista Dembi ee Carruurta Loo Tixgeliye in Ay Aad u Da’ Yar yihiin Kuwaas Oo Aan Si Buuxda U kala Fahamsanayn Sax iyo Qalad, taxanaha koowaad ee ka mid ah taxane shan qaybood ka kooban,guji halkansi aad u akhridid qaybta Af Ingiriisida iyohalkansi aad u akhridid qaybta Af Soomaaliga.
Si aad u akhridid qaybtii labaad, Xabsiyeynta Carruurta Ka hor inta ayna Maxkamaddu Go’aan ka Gaadhin In ay Yihiin Dambiileyaal,guji halkansi aad u akhridid qaybta Af Ingiriisiga iyohalkansi aad u akhridid qaybta
Hay’adda Horizon waa Urur Maxalli ah oo ka hawlgala Somaliland kana shaqeeya sidii loo horumarin lahaa sarreynta sharciga iyo xuquuqal insaanka. Warbixinaha iyo daraasadaha aanu soo saarnaa waxa ay daah-furaan arrimaha taaggan ee lagu ogaaday shaqada aanu qabano. Waxa ay bixiyaan xog iyo gorfeyn loogu tallo galay in ay cariso doodda ka dhaxaysa daneeyeyaasha, dadweynaha iyo deeq-bixiyaasha iyo in ay kor u qaado siyaasadaha xukuumadda iyada oo lagu salaynayo qadarinta xuquuqal insaanka, sarraynta sharciga iyo dhiirigelinta isku filaanshaha.
Si aad wax badan uga ogaatid hawsha aanu qabano, fadlan booqo degalka internet-ka aanu ku leenahay ee www.thehorizoninstitute.org nagala socda Twitter @Horizon_SL iyo Facebook @HorizonInstituteSomaliland.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee aad u baahan tahay, waxa aad nagala soo xidhiidhi kataa email-ka [email protected]
Ciqaabta Dilka (Death Penalty)
Odoyaal Kasoo Jeeda Gobollada Saaxil Iyo Togdheer Oo Cabasho Ka Muujiyay Komiishanka Doorashooyinka [ Muuqaal ]
Isu-duwaha Cusb Ee Ciyaaraha Gobolka Togdheer Oo Waraysi Lala Yeeshay Iyo Qodobada Miiska Saaran [ Muuqaal ]
Booliska Dalka Kenya Oo Ka Digay Qawlaysato Gabdhaha Yaryar af-duubanaysa.
Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Wakiilada Oo Sheegay In Aanu Suurta-gal Ahayn In Diwaan Galin Wakhtigan Laga Bilaabo Gobolka